Ra’iisul Wasaare Khayre oo Casho Sharaf Hoygiisa ugu Sameeyay Madaxwaynaha Jubaland (Daawo) – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Casho Sharaf Hoygiisa ugu Sameeyay Madaxwaynaha Jubaland (Daawo)
Abriil 3, 2019 6:14 b 1
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay waxa uu hoygiisa casho sharaf ugu samaayeeyay madaxwayaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam iyo wafdiga uu hogaaminayo ee Muqdisho ku sugan.
Madaxweynaha Jubaland ayaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uga mahadceliyay cashada uu ku sharfay isaga iyo wafdiga ku wehliya socdaalkiisa magaalada Muqdisho.
Casho sharafta kadib ayaa ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxwaynaha Jubaland, waxa ay kormeereen qaybaha uu ka koobanyahay xafiiska Ra’iisul Wasaararaha oo dib-u-dhis ballaaran lagu sameeyay.
Madaxweynaha Puntland oo Kulan La Qaatay Haweenka Gobolka Bari. (Sawiro)
Xildhibaan Dhakool: “ Somaliland Hal reer ayaa isku koobay” (Daawo)
maxamed xa,ari all khaliiji 1 year ago
waxa rabaa email0 com si aan idin kugu soo diro kayga waa radio jariiban muug puntland somalia africa magaayga maxamed xamari all khaliiji